I-China Eco-friendly I-bamboo Fibre yoLudwe lweeVenkile zeSidlo seTafile kunye neFektha | Gianty
I-bamboo kunye ne-Wooden Cutlery
Itheyibhulethi enokuphinda isebenze
I-Eco-Friend bamboo Fibre yoKuhlwa kweTafile yeDiski
Umbala omnandi kunye nochwayitisayo wosana kunye neseti yokutya kwabantwana uyathandeka kakhulu ekwi-eco-friendly kwaye izinzileyo yenziwa kwifayibha yemanzi bamboo ngaphandle kwezithako ezinetyhefu. Ikhuseleke kakhulu kuneplastiki kunye nezinye izixhobo eziyingozi. Kwaye ukuthungwa kwe-bamboo kuyenza ibe ntle ukuba abantwana babambe.
Iseti yefayibha ye-bamboo, Ngobunzima bendalo Kubandakanywa iziqwenga ezi-5 zabantwana zokutyela ezisetiweyo ukuze kube lula ukubamba izandla. Isipuni somntwana kunye nefoloko zigudileyo kodwa zikhululekile kwaye zibambe ngokwaneleyo ukuze umntwana akwazi ukukhula ngendlela efanelekileyo yokuzondla.
Le seti yokutya emibalabala ilungiselelwe ngokukodwa abancinci! Kubandakanya isitya esincinci, ikomityi ye-bamboo, iplate yabantwana, isipuni kunye nemfoloko - zonke zineprinta ezintle, ezinokukhuthaza abantwana bakho abancinci ukuba batye ngokwabo.
Ukutya kukhuselekile, Ukusetyenziswa okuhlala ixesha elide, Isidlo sethu sangokuhlwa esenziwe yifayibha yendalo ye-bamboo kunye nesitatshi sombona, yi-FDA kunye ne-BPA yasimahla, ayinabungozi kwaye iyathandeka. Ilungele ikhaya, ipikniki, ipati, uhambo, iresityu, ngaphandle nangaphezulu.
Njengesityalo esizinzileyo, bamboo inikezela ngeendlela ezicocekileyo nezinyulu zezinto ezinokuphinda zilahlwe kwaye zinokuphinda zisebenze.
I-bamboo yinto enhle yendalo kunye neyendalo kwezinye izinto zeplastiki. I-bamboo ikhula ngokukhawuleza kwaye igcwalise ngokukhawuleza okukhulu kakhulu, ngoko ke iimpahla azikaze ziphele.
I-BPA imele i-bisphenol A. BPA yimichiza yemveliso esetyenziselwa ukwenza iiplasitiki ezithile kunye nee-resin ukusukela kwiminyaka yoo-1960. Olunye uphando lubonise ukuba iBPA inokungena ekutyeni okanye kwiziselo kwiziselo ezenziwe ngeBPA. Ukuvezwa kwe-BPA yinkxalabo ngenxa yeziphumo zempilo ezinokubakho zeBPA ebuchotsheni kunye ne-Prostate gland yeentsana, iintsana kunye nabantwana. Ingachaphazela nendlela yokuziphatha kwabantwana. Uphando olongezelelweyo libonisa ikhonkco elinokwenzeka phakathi kweBPA kunye nokunyuka koxinzelelo lwegazi.
Imveliso engasimahla yeBPA yenye engasebenzisi i-organic Bisphenol A kulwakhiwo lwayo. Kwixa elidlulileyo iimveliso zeplasitiki ezininzi ezinje ngeebhotile zabantwana, iipleyiti zeplasitiki kunye nokuchetywa, izikhongozeli zokugcina kunye neebhotile zesiselo zenziwe kusetyenziswa iBPA.
Into I-Eco-Friend bamboo Fibre yoKuhlwa kweTafile yeDiski
Umxholo isitya, isitya, ikomityi, imfoloko, isipuni
Isixhobo sokusika I-bamboo fiber
Ubungakanani 42 * 27 * 7.5cm
Ubalo lweCarton Iipakethi ezi-6
Ubungakanani bebhokisi 50 * 43 * 29cm
Edlulileyo: I-CPLA eCwecwe lokuSika iBhokisi yokuThengisa kunye neBhokisi yokubonisa iTi-away
Okulandelayo: I-CPLA enokusebenza kwakhona yeCCLA enokusebenzisana
Ukucola okwenzeka kwiCompostable kwakhona
Itheyibhulethi enokuSebenza kwakhona
Ukuphinda usebenzise i-Cpla Cutlery
Ukusebenza kwakhona kweCpla Tableware
ICPLA esekwe kwiPlanethi engasetyenziswayo yePlanethi engasetyenziswanga ...
ICPLA engenasipeleki Esisisigxina Sokuphinda Sisebenzise ...
I-CPLA enokusebenza kwakhona yeCCLA enokusebenzisana